Ogaden News Agency (ONA) – Madaxa Amniga ee DUBAI oo ku baaqay in la Qarxiyo Aljazeera!
Madaxa Amniga ee DUBAI oo ku baaqay in la Qarxiyo Aljazeera!
Taliyaha Ciidamada Amniga ee Imaarada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo bartiisa Twitter ku qoray hadalo ka dhan ah warbaahinta Aljazeera oo uu ku sheegay warbaahinta ku hadasha afka kooxaha argagaxisada ah.
General Dhahi Khalfan ayaa bartiisa twitter ku qoray qoraalo uu ku sheegaya in warbaahinta Aljazeera ay taageero siiso kooxaha xagjirka ah isla markaana khatar ku tahay amniga dalalka Carabta.
“…Isbaheysiga (Sacuudiga & Imaaraatiga) waa inay duqeeyaan warbaahinta ISIS, AlQacida, Al Nusra iyo argagaxisada….” ayuu bartiisa twitterka kusoo qoray Sarkaalkan ugu sareeya laamaha amaanka ee Imaarada Dubai.
Qoraalkan ayuu soo galiyey Jeneraalka kadib weerarkii ka dhacay Masaajid ku yaal gobalka Sinaay ee dalka Masar oo jimcihii kooxo la rumeysan yahay inay yihiin Daacish ay ku dileen in ka badan 300 qof oo cibaadeysanayey.
Agaasimaha guud ee warbaahinta Aljazeera Yaser Abuhilalah ayaa hadaladan ku tilmaamay kuwo dhiiri gelinaya in falal argagaxin ama weerar ah lala beegsado warbaahinta Aljazeera, wuxuuna sheegay inuu mas’uulkan qaadi doono eeda hadii wax dhibaato ah soo gaarto hawlwadeenada warbaahintaasi.